AKHRISO: Sannad Walba Email Xusuusin Dhalasheyda Ah, Ayaan Ka Helaa Aabahay Oo Dhintay - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaAKHRISO: Sannad Walba Email Xusuusin Dhalasheyda Ah, Ayaan Ka Helaa Aabahay Oo Dhintay
Natasha Salman aabeheed ayaa dhintay bishii Abriil, waxa ayna isu diyaarinaysay xuska dhalashadeeda iyada oo uusan markii ugu horreysay la joogin aabaheed ka hor inta aysan arkin farriin hore oo Email ah, taa oo sababtay in kumanaan qof ay dadka kale la wadaagaan sheekooyinkooda ku saabsan murugada iyo naxariista gabadhan iyo aabehed.
Salmaan Wahiid waxa uu dhintey 24-kii Abriil ka dib markii uu muddo shan sano ah la noolaa cudurka dhanka maskaxda oo loo yaqaan ‘ALS’.
Natasha waxay sheegtay in ay ku riyootay aabbaheed oo “soo booqday” ka hor xuska sanad guurada dhalashadeed oo ku beegnaa bishii Juun ee naga dhamaatay balse ay niyad jabtay markii ay taasi dhici weyday.
Markii la gaaray taariikha 22 sano guuradii ka soo wareegtay dhalashadeeda ayaa Natasha oo ahayd arday barata caafimaadka waxay dareentay cidlo oo waxay garabkeeda ka weyday aabaheed, waxa ayna go’aansatay in ay eegto farriimihii hore ee Email-keeda.
Hase yeeshee markii dambe waxay Email-keeda ku dhex aragtay farriin ka bilaabanaysay ‘Baba’ kadddib farriintii ayay sii furtay waxaana ku qornyad “Dhalasho wacan Dr Natasha, aabaha wuu ku jecel-yahay markasta”
“Farriinta ayaa waxa uu ku diray email aan inta badan isticmaalin sidaa darteed mar arkin, laakin hadii uu email-kayga jaamacadda ku soo diri lahaa waan arki lahaa” ayay tiri Natasha.
Salman waxa uu xusuusinta email-ka dhalashada gabadhiisa ku xiray bishii July ee 2017-kii, laba sannadood kaddib markii laga helay xanuunka ‘ALS’.
“Markii uu email-kaas qorayay waxa uu ka fakaray inta uu noolaan karo, maadaamaa laga helay xanuunkan,” ayay tiri.
Email-ka aad ayuu ii farax geliyay. Waxaan sidoo kale eegay cinwaanada walaaladey, waxaana ku arkay email la mid ah kayga oo uu iyagana taariikhda dhalashadooda ugu hambalyeeynayo.
“Saaxibadey ayaa ii sheegay in email-ka aabahay uu yahay mid cajiib ah sidaa darteed waxaan soo dhigay barta Twitter-ka , falcelintii aan ka helayna waxay ahayd mid qeyral-caadi ah.”
‘Sheekkoyinka qalbiga taabanaya’
Waxay tiri: Waxaan rabay inaan u jawaabo dadka uu aabahoood geeriyooday haatan, sababtoo ah waxaan ku fakaray iney si khaldan u fahmaan.
Dhageysiga sheekooyinka dadka kale ayaa aad ii caawiyay. Saaxibaday aad ayay u wanaagsan yihiin balse lama hadli karo sababtoo ah ma oga waxa aan dareemayo iyo dhibaatada aan marayo. Dadku waxay ii soo dirayeen farriimo ku qotoma iney dabaal degayaan Maalinta Aabeyaasha Adduunka markii ugu horreysay iyagoon aabahod la joogin, anigana jawaabtayda waxay ahayd ‘sidoo kale’.
“Dadku qaar waxay igu oronayaan, adiga ayaaba nasiib leh oo farrintaas aabaha ka helay halka qaarkoodna ay igu dhiiragalinayaan inaan la qabsado nolosha aabe la’aanta.”
“Balse dhanka kale waxaa jira dad qaarkood oo ii sheegay inuusan aabahood dhimanin hase yeeshee uu xiriirkoodii lumay.”
“Waxaan ku iri xitaa haddii uusan xiriir wanaagsan idinka ka dhexeynin weli aabeyaashin wey idin jecel-yihiin waxayna ii sheegeen iney haatan wixii ka bilowdo ay hagaajin doonaan xiriirka iyaga iyo aabayaashood.
Natasha iyo walaaladeed Nayha iyo Soha waxay ka taxadari jireen aabahood kaddib marka ay jaamacadda ka yimaadaan. Marka hore waxay u duugayaan ama u riix-riixayaan gacmaha kaddibna luqunta iyo lugaha.
Natasha waxay sheegeysaa in aabeheed uu jeclaa inuu wax kasto duubo, oo waxay haatan dib u dhageystaa muuqaalladii uu horay u duubay